Ejipta: 2011 Teny Anivon’ireo Lahatsoratra Am-bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Janoary 2012 1:50 GMT
Tonga tamin'ny fiafaràny ny taona 2011, ary miaraka amin'ireo zavatra rehetra nitranga tao Ejipta, dia zava-dehibe loatra ny hitanisàna ireo lahatsoratra tanaty bilaogy izay tena nanan-danja sy niteraka resabe nandritra ny taona.
Maikel Nabil: “Tsy tokana velively izany mihitsy ny Tafika sy ny Vahoaka”
Ity lahatsoratra tanaty bilaogy nosoratan'i Maikel Nabil Sanad [ar] ity dia manana ny lanjany amin'ny sehatra maro: Sanad dia notànana am-ponja noho ny zavatra nosoratany tanaty lahatsoratra am-bilaogy, voalohany voafonja noho ny fanehoana hevitra taorian'ny nanombohan'ny Revolisona Ejiptiana. Ary koa, ilay lahatsoratra dia navoaka iray volana latsaka monja taorian'ny nialàn'ny filoha Ejiptiana Hosni Mubarak, fony tsy mbola nisy sahy nanakiana ny miaramila ny ankamaroan'ny Ejiptiana, na noho ny tahotra, na satria tsy nahita zavatra hokianina.
Izay nosoratan'i Sanad tao anatin'ilay lahatsoratra dia fanaovana fanamby amin'ny fomba nijeren'ny olona maro ny tafika tamin'izany fotoana. Tao anatin'ilay lahatsoratra, Sanad dia nanao lisitra ohatra maro tamin'ireo fisamborana sy fampijaliana, nandritra, ary taorian'ny 18 andron'ny revolisiona izay hitany tahaka ny porofo fa hoe ny tafika dia tsy tafiditra velively tao anatin'ny revolisiona Ejiptiana, ary noho io dia voampanga izy ho “naniratsira ny rafitra miaramila sy namoaka vaovao tsy marina mikasika azy io” sady “namoaka ny tsiambaratelom-piarovam-panjakana” – heloka izay nanamelohana azy telo taona an-tranomaizina, izay avy eo nahena ho roa taona.
Sanad dia mitohy manao fitokonana tsy hihinan-kanina, izay efa ho 130 andro lasa izao no nanombohany azy, hanoherany ny fiampangàna azy. Fanampin'izany rehetra izany, dia ny zava-misy hoe ny fisamborana azy dia tsy nahazo fanohanana sahaza avy eny an-dalambe sy any anaty fampahalalam-baovao any, noho ny fanehoan-keviny any anaty lahatsorany am-bilaogy miteraka resa-be. Na izany aza, dia ity lahatsoratra tao anatin'ny bilaogy ity no nanokatra varavarana ho amin'ny fandravàna ireo fadifady amin'ny fanakianana ny tafika, ary nanomboka teo dia lasa zava-mahazatra ny mahita bilaogy manakiana sy manenjika azy (tafika) [ar].
Mohamed Abo El-Ghait: “Ny Mahantra Aloha Ry Ilay Zanak'Al**ka ireto a”
Maritiora irain'ny #Jan25
Rehefa nanontany olona tao amin'ny Twitter aho momba izay lahatsoratra tanaty bilaogy hitan'izy ireo ho tena nànana ny lanjany indrindra tamin'ny 2011, ity lahatsoratra tam-bilaogy ity [ar] no iray faharoa nahazoana fandrisihana indrindra taorian'ny lahatsoratr'i Maikel Nabil. Voasoratra tany amin'ny Jona tany izy ity, volana vitsy taorian'ny fitsapan-kevibahoaka hanasiam-panovàna ny lalampanorenana. Tamin'izany fotoana, nisy adihevitra be momba ny handefasana ny fifidianana izay ho parlemantera aloha, vao ny famelàna ny parlemanta hanoratra kosa ny lalampanorenana taorian'ny revolisiona avy eo, na hanao komity izay hanoratra ny lalampanorenana aloha, dia avy eo manao fifidianana izay ho parlemantera sy ho filoha aoriana kely. Goavana izany adihevitra izany, ary tonga tamin'ny fara-tampony nandritra ny fitsapan-kevibahoaka.
Mohammed Abo El-Ghait dia nanoratra lahatsoratra iray izay tahaka ny nahitàny hoe ny ankamaroan'ireo izay nandray anjara tamin'ny revolisiona dia tsy nisaina loatra mikasika ny adihevitra ‘avolenta’ toy izany na dia ny hanatsara ny fari-piainana ankapobeny aza no tanjon'izy ireo. Ao anatin'ilay lahatsoratra, dia zavatra roa lehibe manan-danja no nataony, voalohany dia nandrafitra ny fomba fiteny izy, izay nampiasain'i Alaa Abdel-Fattah taty aoriana tao anatin'ny lahatsoratra goavana iray nanao hoe “The Dream Comes First” [ar], na “Ny Nofy no Mialoha”, hatramin'ireo maro hafa izay nilalao io fomba fiteny io tany anatin'ny fifanakalozan-dresak'izy ireny. Ny zavatra faharoa nataony dia izy nanao fanamby tamin'ny fomba fisainana fa hoe ny revolisiona Ejiptiana dia revolisiona am-pilaminana atosiky ny saranga antonontonony sy ny ambony ihany.
Natombony taminà sarin'olona mahantra ny lahatsorany, na ireo antsoin'ny Ejiptiana hoe “Sarsageyya”, manaraby azy ireny noho ny fomba fitafiny, ny lafim-piainana niaviany ary ny fiantraikan'ny fahitàna an-dry zareo anaty sary, avy eo izy dia nandona ireo mpamaky azy tamin'ny filazana hoe ireny sary ireny dia natao ho an'ireo maritiora maty nandritra ny revolisiona, na dia nisisika mafy aza ireo mpampita vaovao amin'ny tsy hamoahana afa-tsy ny sarin'ireo maritiora avy amin'ny saranga antonontonony.
Alyaa El-Mahdy: “Taokanto mihanjahanja”
Manana adihevitra tsy manalavitra an'izay isika, izay nitranga teny an-tsehatry ny Sosaitin'ireo Mpanakanto Mahaleotena momba ny fipipizan'i Marcel Duchamp sy izay navoakan'i Alyaa El_Mahdy, na tsia, tao amin'ny lahatsoratra am-bilaoginy [ar]. Na izany aza, ity lahatsoratra ity miaraka amin'ireo sary mihanjahanja izay azy tenany ihany, ary ny sasantsasany, dia inoana fa mety ho avy amin'ny iray tamin'ireo lahatsoratra am-bilaogy be mpitsidika indrindra tao Ejipta nandritra iny taona iny. Nahazo mpitsidika maherin'ny 5 tapitrisa izy hatreto, ary ianao dia afaka manamarina tsara fa saika ny ankamaroan'ireny mpitsidika ireny dia mankany amin'io lahtsoratra voafaritra io daholo.
Nisongadina i Alyaa ary taty aoriana kely dia nanao tafatafa ho an'ireo gazety maro teo amin'ny fireneny sy avy amin'ny iraisam-pirenena, ary i Ahmed Abd El-Fatah koa nibitsika [ar] fa ny fanasongadinana azy tao anatin'ny gazety Al-Masry Al-Youm amin'ny teny Anglisy (iray amin'ireo gazety sangany amin'ny teny Anglisy ao Ejipta) dia nahazo ny ambony indrindra tamin'ny isan'ireo mpitsidika teo amin'ny tantaran'ny gazety. Ny fanapahan-keviny hamoaka sarin'ny tenany mihanjahanja koa dia nandrehitra adihevitra nafàna teo anatin'ny aterineto sy tety ivelany koa aza. Izaho manokana aloha, mahafantatra olona izay tsy mamaky velively lahatsoratra anaty bilaogy aho eo amin'ny fiainan-dry zareo, nefa dia nitsidika ny bilaogin'i Alaa ry zareo.
Lahatsoratra am-bilaogy bebe kokoa
Telo andro nialoha ny nanombohan'ny revolisiona Ejiptiana tamin'ny 25 Janoary, ary andro vitsy taorian'ny an'ny Tonuiziana, i Zeinobia dia nanoratra lisitra iray amin'ireo lesona heveriny fa tokony hianarana avy amin'ny revolisiona Toniziana. Andro iray taorian'ny nianjeran'i Mubarak, ary raha ny olona mbola mankalaza ny fandresen-dry zareo iny indrindra ka nandao ny kianja Tahrir hody any an-tranony, Hossam El-Hamalawy dia nanoratra lahatsoratra iray nampitandrina fa ny revolisiona dia mbola ho ela vao ho tapitra. Narovany ihany koa ny zon'ireo mpiasa ho afaka mitokona, izay inoany fa singa iray tsy misaraka amin'ny revolisiona tahaka ireo fihetsiketsehana teny an-kianja rehetra teny.
Nandritra ny fitorevahana tao Tahrir tamin'ny Jolay, Sandmonkey dia nanoratra lahatsoratra iray nitondra ny lohateny hoe, “Tahrir: fanazarantena iray amin'ny Fananganana Firenena“, tanatin'io izy no niteny fa ankoatry ny lanja ara-politikan'ilay fitorevahana ho toy ny tsindry atao mba hahatanteraka ny fitakian'ny revolisiona, ireo rehetra nandray anjara tamin'ilay hetsi-panoherana dia niaina zava-mahazendana ara-piarahamonina satria “vetivety foana i Tahrir dia lasa taratr'i Ejipta amin'ny endriny bitika, miaraka amin'ny olany rehetra, saingy tsy misy governemanta foibe. Ary tsy mba fetsifetsy ireo mifanindran-dàlana aminy”. Notohizany ny fampitahàna ireny fifanindran-dàlana ireny, dia hoy izy namàrana ny lahatsorany:
raha tsorina, raha toa ianareo liana amin'ny fanehoana an'isa ny olana atrehan'ny fiarahamonina sy ny làlana tsara hamahàna azy ireny, i Tahrir no toerana tokony hovonjenareo izao dieny izao.
Ny lahatsoratr'i Sandmonkey dia mampahatsiahy ahy ilay lahatsoratra momba ny Obliviology, ka tao anatin'izay izy dia somary nanitatra ihany koa namaritra ny Kianja Tahrir saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia ny nandritra ny 18 andron'ny revolisiona. Ary farany, lahatsoratra iray hafa mahaliana avy amin'i Karim Shafei [ar] – izay nasongadin'i Ayesha Saldanha eto – ao anatin'izany no namaritany an'i Kairo (renivohitr'i Ejipta) amin'ny fomba feno harabiana, mampitaha azy io amin'ny firenena bitika kely iray mahaleotena fa tsy hoe tanàna fotsiny amin'izao.
Fisaorana ho an'i @Sarahngb, @7okaha, @BentAboEs3oud, @IbrahimNegm, @YMetry, @Sankafollah, @Biiishi, @HusseinElGammal, @NermeenEdrees, @SlipknotMody ary ireo rehetra nanampy tamin'ny fanolorana soso-kevitra ho ahy momba ireo lahatsoratra avy any anaty bilaogy natolotra teto.